Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo shir-guddoomiyay kulan looga hadlayay xoojinta xiriirka laamaha amaanka iyo bahda Garsoorka – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo shir-guddoomiyay kulan looga hadlayay xoojinta xiriirka laamaha amaanka iyo bahda Garsoorka
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Ali Saciid Fiqi ayaa shir Gudoomiyay Kullan looga hadlaayay Arrimaha Amaanka ee Deeganada Koonfur Galbeed.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qeyb galey Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee koonfur Galbeed , Sarakiisha Ciidamada Booliska , Bahda Garsoorka koonfur Galbeed iyo Laamaha Amaanka .
Ujeedada Kullanka ayaa waxaa ay eheed mid lagu xoojinaayay wada shaqeynta lamaha Amaanka iyo Bahda Garsoorka Koonfur Galbeed.
Guddoomiyaha Golaha Wakiilada dowlad Goboleedka KGS Dr. Ali Siciid Fiqi ayaa Ciidamada Amaanka iyo Bahda Garsoorka KGS ku dhiirageliyay in ay sii laba jibaaran Wadashaqeyntoda si hal meel looga soo wada jesto ladagaalanka Kooxda Nabadiidka Al Shabab oo dhibaato ku haaya shacabka Sooomaaliyeed.
Shirka ayaa waxaa lagu go’aamiyay in la xoojiyo wadashaqeynta lamaha amaanka iyo Bahda garsoorka KGS ,iyo qof kasto oo mid ah reer Kgs dacwad ugu taga Nabadiidka Al shabab tilaabo sharciga waafaqsan la qaadi doono.
Marwo Sacdiyo Yuusuf oo ka mid noqotay Guddiga madaxa Bannaan ee doorashooyinka Qaranka
Doorashada Soomaaliya: ”Afar goor baan ka wada hadalnay waana isku fahmi weynay”
Doorashada Soomaaliya: ''Afar goor baan ka wada hadalnay waana isku fahmi weynay''